=လူထုကျန်းမာရေး(အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက် သောက်လို့ရလဲ)=
ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်
အရက်သောက်တာ အားမပေးပါ။ သို့သော် သောက်နေတဲ့ သူများကိုလည်း
မပုတ်ခတ်ပါဘူး။ နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး ကြောင့် ယနေ့ခေတ်မှာ
သောက်တာပာာ အခုနောက်ပိုင်း လူတွေ အတွက်က ရေဝယ်သောက်သလို
ဖြစ်လာပါပြီ။ ယခုလို သင်္ကြန်ကာလာ နီးလာရင် ပိုပြီးတော့တောင် သောက်ဖြစ်ကြ
ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သောက်တဲ့ နေရာမှာ သတ်မှတ်ချက်လေး တစ်ခုတော့ရှိသင့်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက် ကလည်း ယောကျာင်္း နဲ့ မိန်းမ မတူပါ။
1. Whiskey (40% alcohol)
အမျိုးသားတွေ က တစ်နေ့ကို ၆၀ မီလီလီတာ ထက်ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေ ကတော့ ၃၀ မီလီလီတာ ထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
2. Beer (5% alcohol) -
အမျိုးသားတွေက တစ်နေ့ကို နှစ်ခွက် (720 ml) အမျိုးသမီးတွေ က တစ်ခွက်(360 ml) ထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
3. Wine (12% alcohol)-
အမျိုးသားတွေ က တစ်နေ့ ကို ၃၀၀ မီလီလီတာ ထက်မပိုသင့်သလို
အမျိုးသမီးတွေ ကတော့ ၁၅၀ မီလီလီတာ ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ အခုပြောထားတဲ့
အတိုင်းအတာတွေ ထက်ပိုပြီးသောက်ရင် ကြာလာရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ????
1. ရုတ်တရက်မှာတော့ အသည်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရှိန်မြှင့်ပြီး အလုပ်
2. အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ Alcoholic Hepatitis လို့ခေါ်တဲ့ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့
အသည်းရောင် ရောဂါ ဖြစ်လာပါတယ်။ 3. ကြာလာရင် အသည်းခြောက်ပြီး
အသည်းကင်ဆာ အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်သတိထားရမယ့် အချက်ကတော့
အရက်ပာာ ဆေးဝါးတော်တော်များများ နဲ့ မတည့်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ဆေး အာနိသင်ကို
လျှော့စေသလို ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပါ ပိုဆိုးစေပါတယ်။ တချို့ကပြောပါတယ်။
အရက်ကို နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး။
မသောက် တတ်တဲ့သူတွေ အတွက် နှလုံးကျန်းမာ ရေးတစ်ခုတည်း အတွက်နဲ့ အရက် စမ်းသပ်သောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုလက်စထရော ကျစေမယ့် အစားအစာ တွေ များများစားပြီး ဆီကြော်မုန့်တွေ လျှော့ စားကာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လည်း
နှလုံးကျန်းမာရေး ကို အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။